Yintoni ofuna, sinako ngokusesikweni kwamaza, ilogo, umbala, imilo
Kunzima ukufumana isisombululo anti-ubusela efanelekileyo impahla ngamaxesha. Yasen tsaka ku sisombululo umnikelo design ezi mpahla kuba simahla kwiimfuno zabaxumi.
Yasen kakhulu kwi-R & D, ukuvelisa ekuthengiseni iimveliso EAs. Yasen uye uluhlu olupheleleyo iimveliso EAs: RF / AM tag nzima, ileyibhile RF / AM, EAs RF / inkqubo zokhuseleko AM, EA detacher njl
Izicelo ziquka izixhobo zombane, umqhaphu, izihlangu kunye ezinkulu. iimveliso zethu ezithandwa kurhwebo lwasemakhaya nakwamanye amazwe.
Yasen eye isiqinisekiso ISO9001, isiqinisekiso CE kunye nesatifikethi SGS kwiinkqubo EA. A ubungakanani iimveliso zethu kunye nobugcisa kwakhona sifuna ukukhuselwa patent.
Kusukela ngomnyaka KA 2001
Zobungcali nomdlandla iqela R & D ukuba Yasen ukunceda abaxhasi bethu kunye noyilo nendlela and practical. imigca imveliso 10 kunye iseti epheleleyo izibonelelo yemveliso yoqobo, izixhobo kunye nezixhobo nokuvavanya ukuba Yasen ukubonelela iimveliso ezisemgangathweni ezithembekileyo ixabiso nokhuphiswano kubaxhasi zethu ngexesha.
Yasen unako ukuvelisa 100 million amaqhosha EAs tag kunye nezigidi ezingama-800 iziqwenga iilebhile AM ​​ngonyaka.
Zonke iimveliso ziveliswa kwaye yavavanyelwa uyifaka ngemi- yesizwe neyelizwe jikelele.
Yintoni Abathengi Say?
Siye kunye Yasen ngaphezu 2 Malunga neminyaka kwaye babe ndiyincutshe ekhangela emva ishishini lethu. ixabiso wazo wokudla kunye nesevisi yabathengi emihle, ukwenza umsebenzi wethu kakuhle ngakumbi. --- Titan Thompson
imveliso bhetyebhetye Yasen liye lasinceda ukugcina ukulawula ngokupheleleyo zokuthenga yethu ngeli yokunciphisa iindleko. Yasen uye wasinceda ufake inkqubo alarm EAs kwisayithi. --- Joy Jansen
Kuye kwaba mnandi ngokwenene ukuba basebenzisane kunye Yasen Co. ukunyaniseka kwawo emsebenzini kunye umgangatho wocikizeko iimveliso zabo iimpawu eziphambili nkampani. Ndingathanda ukudlulisa umbulelo wam kwiqela Yasen ngenkxaso yabo kakhulu kule minyaka siye saba ithuba ukusebenzisana nabo. ------- Amari Wilder
Intsebenziswano enkulu Yasen ngakumbi ubuhlobo kunye Ben. Ben ngokwenene a guy elungileyo; kufuneka sibe intsebenziswano engaphezulu ------ Jamie Smith
Optical Tag Detacher , Glass Tag Detacher , Mini EA Detacher , Magnetic Key Detacher , Ukhuseleko Detacher Cap , EAs Glass Tag Detacher ,